महामारीमा भरोसा प्रसुति गृह : निमेष सेवा रोकिएन, कोही बिरामी फर्केनन् – Health Post Nepal
महामारीमा भरोसा प्रसुति गृह : निमेष सेवा रोकिएन, कोही बिरामी फर्केनन्
२०७७ पुष १६ गते ९:५०
कोरोना कहरमा चीनको उहान जलिरहेको थियो, युरोप र अमेरिकामा महामारीको आगो सल्किँदै थियो। नेपालमा परीक्षण त सुरु भएको थियो, तर उपचारको भर थिएन।
प्रदेश १ र २ पहिलो चरणको महामारी चपेटामा थिए। अस्पताल प्रत्येक बिरामीलाई कोरोना संक्रमितका आँखाले हेर्दै गेटबाटै फर्काउँदै थिए । त्यसमा पनि जोखिम क्षेत्रबाट आएका र ज्वरोका बिरामी त उपचार नै नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था थियो।
त्यही समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोसी अञ्चल अस्पतालमा कुशल व्यवस्थापन देखाएकी डा. संगीता मिश्रालाई परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पतालको नेतृत्वमा ल्यायो ।
डा. मिश्राले अठोट प्रदर्शन गरिन्– ‘म अस्पतालमा आइपुगेपछि एकजना बिरामी पनि उपचार नपाएर फर्किन दिन्नँ।’
‘सुत्केरी व्यथा लागेर छटपटाउँदै आएका महिलालाई गेटबाटै फर्काइयो भन्ने सुन्दा मेरो मन पिरोलिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले मैले त्यही अठोट लिएर काम गरेँ। अन्य बेला बिरामीलाई भगवान मान्ने अस्पतालले त्यसबेला गेटबाट पस्न दिएन।’
विराटनगरमा यस्तै समस्या झेलेर व्यवस्थापन गरिरहेकी डा. मिश्राले काठमाडौंमा पनि यस्तै समस्या झेल्नु नै थियो।
उनले अठोट त गरिन् । तर, कार्यन्वयन गर्ने कसरी ?
अस्पतालको नेतृत्व सम्हालेको भोलिपल्ट नै उनले चिकित्सक तथा नर्ससँगै परामर्श थालिन् ।
त्यहीआधारमा उनले घोषणा गरिन्– ‘अस्पतालमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन दिन्नँ।’
डा. मिश्राले अस्पताल सम्हालेको सात महिना बितिसकेको छ। यस अवधिमा अस्पतालको क्षमता र स्रोत–साधनअनुसार कुनै पनि बिरामी अस्पतालबाट फर्कनुपरेको छैन।
‘अस्पतालको क्षमताअनुसार बिरामीलाई सेवा दिँदै आएका छौं,’ डा. मिश्रा भन्छिन्, ‘उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन दिनरात यहाँका चिकित्सक र नर्सले उत्तिकै साथ दिनुभएको छ।’
अस्पतालबाट कुनै पनि बिरामी ‘रेफर’ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा सम्बन्धित चिकित्सकले पर्याप्त कारण दिनुपर्छ। र, त्यसको जानकारी निर्देशकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था उनले मिलाइन्।
‘बिरामीलाई रेफर गर्नैपरेको अवस्थामा त्यसको कारणसहित सम्बन्धित डाक्टरले जानकारी दिनुपर्दछ,’ मिश्राले भनिन्, ‘रेफर गरेका बिरामीको सूची सबै अडिट लिस्टमा राखेका छौं।’
यसरी काम गर्दा कमिकमजोरी र अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो वर्ष अस्पतालबाट २२ हजारहाराहारी महिलाले इन्डोर (अन्तरंग) सेवा लिएका थिए। तर, कोरोना महामारीमा पनि पछिल्ला चार महिनामा ८ हजारजतिले इन्डोर सेवा लिएका थिए।
ओपिडीतर्फ चार महिनामा ४६ हजार महिलाले सेवा लिएका छन्।
‘अस्पतालको सेवा सधैं खुल्ला छ। प्रसुति गृहको सेवामा महिलाहरूले विश्वास गर्नुभएको छ,’ मिश्रा भन्छिन्, ‘उहाँहरूले गर्नुभएको विश्वासले अझै हामीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ।’
अहिले काठमाडौंमा नाम चलेको निजी अस्पतालबाट समेत प्रसुति गृहमा बिरामी रेफर हुँदै आएका छन्। अस्पतालको सेवासुविधाकै कारण बिरामी चाप बढ्दै गएको डा. मिश्राको भनाइ छ।
९८ कोरोना संक्रमितलाई सफल डेलिभरी सेवा
अस्पतालले हालसम्म १ सय ४८ कोरोना संक्रमितलाई उपचार सेवा दिइसकेको छ। जसमध्ये ९८ जनालाई डेलिभरी सेवा दिएको छ।
‘हामीले ९८ जना संक्रमित महिलालाई डेलिभरी गराएका छौं,’ डा. मिश्राले भनिन्, ‘जसमध्ये ४८ जनाको शल्यक्रिया भएको थियो।’
संक्रमित महिलामा कस्ता जटिलता देखिए?
कोरोना संक्रमित भएका कारण गर्भमा जटिलता नआउने डा. मिश्रा बताउँछिन्। अस्पताल भर्ना भएका दुई–तीनजना बिरामीलाई अत्यधिक रक्तस्राव भएको थियो।
जसलाई औषधीबाट व्यवस्थापन भयो। पछि खासै समस्या नभएको मिश्राले बताइन्।
तर, उपचार गर्दै जाँदा बच्चामा समस्या देखिएको थियो। केही बच्चालाई एनआइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी उनले दिइन् ।
अस्पतालले कोभिड साथै नन–कोभिडलाई कसरी सेवा दियो ?
अस्पतालमा कोभिड बिरामीसँगै नन–कोभिडको उपचार गर्न ठूलो चूनौति हुन्छ।
अस्पतालको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि १ सयदेखि १ सय २० जना दैनिक भर्ना हुन्छन्। त्यसबाहेक ५ देखि ७ सयसम्म ओपिडी सेवाका लिइन्छन्।
सबै सेवालाई नियमित गर्दै कोभिड संक्रमितलाई सेवा दिन अलि चुनौतिपूर्ण रहेको डा. मिश्रा बताउँछिन्।
‘यहाँका कर्मचारीले डबल सिफ्ट गरेर वा छुट्टी नलिएर काम गर्नुभयो। यहीँ भएका जनशक्तिले दुईतिर व्यवस्थापन गरेर काम गर्नुपर्यो । सेवाका साथै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न उत्तिकै चुनौतिपूर्ण थियो,’ उनी भन्छिन्।
उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणबाट जोगाउन चुनौतिपूर्ण थियो । त्यसका साथै अस्पतालको सेवा पनि सञ्चालन गर्नु थियो। जुनसुकै परिस्थितिमा एक दिन पनि सेवा अवरुद्ध भएन। बिरामीले सहज सेवा पाएको देख्दा गर्व लाग्छ।
कोरोना महामारीका कारण महिलाहरू ढिलो स्वास्थ्य संस्था आउँदा अवस्था जटिल बनिसकेको हुने उनले बताइन्।
गर्भवतीलाई डा. मिश्राको सुझाव
गर्भवतीमा संक्रमण भए सर्वप्रथम मन दह्रो बनाउन सुझाव दिन्छिन्।
उनका अनुसार गर्भवतीले लक्षण याद गर्नुपर्छ। केही समस्या आए तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिनुपर्छ।
‘अहिले कोरोना संक्रमण दर कम भएसँगै मानिसलाई वातावरण एकदमै सहज भएको जस्तो लागिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, संक्रमण भएको खण्डमा गर्भवतीमा जटिलता धेरै हुनसक्छ।’
गर्भवती साथै अन्यले पनि जनस्वास्थ्य साधनको मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्दछ। भीडभाडमा नजाने, मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।